တရုတ်စက်မှုသတင်းများစက်ရုံ - စျေးပေါတဲ့စက်မှုဝန်ကြီးသတင်းများပေးသွင်းပို့ကုန် - အပိုင်း 2
အမေရိကန် Hoverboard မီးတဦးတည်းသေခံခြင်းနှင့်နှစ်ဦးကိုဒဏ်ရာစေသော
အချိန် post: 03-15-2017
အမေရိကန်အဆိုအရမီဒီယာ hoverboard မီးပေါက်ကွဲမှုအဖြစ်အပျက်များအတွက် Harrisburg မြို့မြို့၌မတ်လ 11, 2017, အပေါ်ကဖော်ပြခဲ့သည်ကလေးတစ်ဦး၏အသေခံခြင်းမှဦးဆောင်နှစ်ခုမိန်းကလေးငယ်များဒဏ်ရာရရှိ, တစ်မီးသတ်သမားအပြင်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ မီးသတ်သမားအဆိုအရမှလွတ်မြောက်ရန်အလို့ငှာ, ကနေသားကောင်များ၏တဦးတည်းအတွက်, 8 pm မှာ, ဖော်ပြထား ...ဆက်ဖတ်ရန် »
လျှပ်စစ် Hoverboard ဘဝကိုပိုပြီးပေါ့ပေါ့ & အခမဲ့စေသည်
အချိန် post: 03-07-2017
ယနေ့ခေတ်, အားကစားရုံးမှာရုံး gens, အဖြူရောင်-ကော်လာလုပ်သားများဖို့အကြိုက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်လာခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာများ၏နေ့၌ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသီးအသီးအစိတ်အပိုင်းများကိုယ်ခန္ဓာ၏အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များတွင်အမျိုးမျိုးသောအသေးစားပြဿနာများအထူးသဖြင့်ကျရောက်နေတဲ့စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများမရှိခြင်း, ဖြစ်ကြသည် ထိုကဲ့သို့သောအနာလည်ပင်း, mouse ကိုလက်, မျက်စိခြောက်သွေ့ ther အဖြစ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ul 2272 လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး & Hoverboard ကြားဆက်ဆံရေး
အချိန် post: 02-07-2017
ထို့အပြင်အမေရိကန်စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအသင်း (CPSC), ကြောင့်ယခင်နှစ်က '' hoverboard မီးအဖြစ်အပျက်ရန်, Self-ဟန်ချက်ညီဆိုင်ကယ်ကိုခေါ် Hoverboard အားလုံး Self-ဟန်ချက်ညီ Scooter သို့မဟုတ် Hoverboard ထုတ်လုပ်သူအကြောင်း, counterbalanced ယာဉ်များတင်သွင်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးသည့်လိုက်နာရမည်ကြေညာလိုက်ပါတယ် .. ။ဆက်ဖတ်ရန် »
တစ်ဦး hoverboard စီး၏ကောင်းကျိုးများ
အချိန် post: 12-26-2016
Hoverboards ယနေ့အလွန်ရေပန်းစားဖြစ်ကြပြီးတကသငျသညျလကျကလေးမြားအတှကျအခမဲ့ hoverboard ဝယ်ဖို့ချင် hoverboard.If ဟာကြောက်မက်ဘွယ်မိမိကိုယ်ကိုချိန်ခွင်လျှာနှင့်အတူတိုတောင်းတဲ့ခရီးစဉ်ကိုယူကလေးတွေ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် aults များအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်, မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာသည်, သင်သည်များစွာသောသတင်းအချက်အလက်များကိုရနိုင်2ဘီးကိုရည်မှတ်အင်တာနက်ကနေ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဘယ်ကြောင့်လျှပ်စစ် Scooter သို့မဟုတ်စကိတ်စီးဒီတော့စျေးကွက်အပေါ်ကြိုဆိုခဲ့တာလဲ
အချိန် post: 12-14-2016
အသစ်ကတစ်နှစ် Enter, လျှပ်စစ်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter လယ်ကိုယှဉ်ပြိုင်မှု ပို. ပို. ပြင်းစွာသောအဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးထုတ်လုပ်သူ, သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေစတင်စားသုံးသူအတွက်၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အဆင့်အတန်းကိုခိုင်မာအောင်နှင့်ချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်ပါပြီ။ ရေးသားသူအမြဲတမ်းအရေးအပါဆုံးတွဲဖက်များထဲမှတစ်ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အဘယ်ကြောင့်ချိန်ခွင်လျှာ Scooter ဖြူကော်လာမယ့်အလုပ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်သနည်း?
အချိန် post: 11-22-2016
သငျသညျအလုပ်မလုပ်ကိုသွားသည့်အခါသငျသညျအမြားဆုံးအဘယ်အရာကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေသလဲ? ငါသူတို့လုပ်ကိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့လမ်းအပေါ်လူမဆန်စွာကုသမှုကြောင့်ထိခိုက်နေကြမဟုတ်လျှင်လူအများစုသူတို့နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ကြောင်းပြောပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ, ဘတ်စ်ကားမြေအောက်ရထားစီးနင်းခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ်မှသင်တန်း၏, ဝေးလမ်းလျှောက်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသွားပါ။ ထိုသူတို့အသုံးခုအကြားမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် disadv ရှိတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »
သငျသညျ Scooter ဟန်ချက်ညီဤအသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်သိသလား
အချိန် post: 11-03-2016
သငျသညျ Scooter ဟန်ချက်ညီများအတွက်ဘယ်နှစ်ယောက်သိလားအကြံပေးချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်? ယနေ့တွင် Koowheel Editor ကိုသင်တို့အဘို့မိတ်ဆက်ကြကုန်အံ့။ ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာသို့မဟုတ် hoverboard များအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းလမ်း: 1. အသုံးပြုမှု Koowheel ဟန်ချက်ညီ Scooter ရဲ့ဘီး၏အခန်းကဏ္ဍကိုကွဲကွာနေရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသင့်လျော်သော inspecti လုပ်သင့်ပါတယ် ...ဆက်ဖတ်ရန် »